फिल्म हेर्न तीन घन्टासम्म हिँडेर गइन्थ्यो : राजन कार्की - Gandaki Khabar
लोक पाराका गीतलाई फिल्ममा स्थान दिनुपर्छ
-Gandaki Khabar	 -११ पुष २०७७, शनिबार १२:२१ 0
गण्डकी खबर । राजन कार्की लोकदोहोरी गायक हुनुहुन्छ । २०६३ सालमा ‘कस्लाई दिनु दोष’ एल्बमबाट औपचारिकरुपमा सांगीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएका कार्कीले विभिन्न गीतको माध्यमबाट आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाइसक्नु भएको छ । बिचारी चौतारा स्याङजामा जन्मिनुभएका कार्की राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठान नेपाल गण्डकी प्रदेश समिति पोखराका सचिव हुनुहुन्छ । गायक कार्कीसँग यसपाली हामीले सांगीतिक क्षेत्रको नभई फिल्मी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही प्रश्न गरेका छौँ ।
हेर्छु, धेरै त हैन कहिलेकाही । फिल्मको नियमित दर्शक त म हैन ।
मैले फिल्म हेर्ने माध्यम फिल्म हल नै हो । कोरोनाको कारण लामो समयदेखि हलमा गएर फिल्म हेर्न पाएको छैन । हलमा फिल्म हेर्ने दिनलाई मिस गरिरहेको छुँ भनौ । घरमा बसेर फिल्म मैले कहिल्यै हेर्दिन ।
घरमा भन्दा त हलमा फिल्म हेर्नु मज्जा आउँछ । हलमा हेर्दा हलको माहोलले फिल्म हेरेको जस्तो आभाष हुन्छ । घरमा फिल्म हेर्दा त फिल्म हैन सिरियल पो हेरे जस्तो लाग्छ सोही कारण घरमा बसेर फिल्म हेर्दिन । बरु घरमा फुर्सद छ भने उपन्यास पढ्छु ।
बाल्यकालदेखि हालसम्म फिल्म हेर्दाको रमाइला अनुभव ?
फिल्म हेर्न गाउँबाट तीन घन्टासम्म हिँडेर पर्वतको सिद्धेश्वर फिल्म हल कुश्मामा जानु पथ्र्यो । सधै जान सम्भव थिएन । मौका छोपेर साथीभाइहरु मिलेर फिल्म हेर्न गइन्थ्यो । मानिसको निधन भएको बेलामा मलामी जाने ठाउँ समेत त्यहीँ बाटोमा थियो । मलामी जाँदा त्यतैबाट फिल्म हेरेर पनि आइथ्यो । अजम्बरी माया त्यसरी हेरेको फिल्म थियो ।गाउँभरिमा हाम्रोमा मात्र टिभी थियो त्यहीं ब्याटी«बाट चल्ने । त्यतिबेला गाउँमा विजुली थिएन । चार्ज गरेर टिभी हेर्नुपथ्र्यो । चार्ज गर्न १ घन्टा टाढा चिलाउनेवासमा बोकेर जानु पथ्र्यो । त्यतिबेला घरमा टिभी हेर्नेको लाइन हुन्थ्यो, फिल्म आउँदाको दिनमा भीड अझ धेरै हुन्थ्यो । अहिले सम्झदा रमाइलो लाग्छ । एकपटक फिल्म हेर्दा मेरो नजिकै एकजना बाजे हुनुहुन्थ्यो । फिल्ममा पानी परेको सिन आयो । उहाँ बाजेले त ए केटा हो छाता निकालो पानी परिसक्यो भन्न थाल्नुभयो । हामीलाई हाँसो लाग्यो ।
हलमा हेरेको पहिलो फिल्म कुन हो ?
पहिलो फिल्म मामाघरमा जाँदा हेरेको हुँ । मैले हेरको पहिलो फिल्म नेपालीमा ‘आफ्नो मान्छे’ र हिन्दीमा ‘तेरे नाम’ थियो ।
मनपर्ने फिल्म कलाकार ?
मलाईं मनपर्ने कलाकार उत्तम प्रधान हुनुहुन्छ । हेर्दा सिम्पल लाग्ने भएकोले मनप¥यो ।
नेपाली फिल्म को सकारात्मक पक्ष भनेको नेपाली फिल्म मौलिक लाग्छ ।
अरुको नक्कल नगरी फिल्म बनाउनुपर्छ । धेरै फिल्म हिन्दी फिल्मबाट कपी भएको जस्तो लाग्छ हेर्दा । आफ्नै मौलिकतामा, आफ्नै कथामा फिल्म बनाउनुपर्छ ।
सानोमा फिल्म हेर्दा अभिनय गर्ने रहर पलायन ?
मलाई फिल्ममा अभिनय गर्ने रहर कहिल्यै पलायन । सानैदेखि गायन क्षेत्रमा नै अगाडि बढ्ने रहर थियो ।
पछिल्लो समयमा नेपाली फिल्म चल्नुमा लोकलयका गीतको महत्वपूर्ण भूमिका छ जस्तो मलाई लााग्छ । सोही कारण लोक पाराका गीतलाई फिल्ममा स्थान दिन आग्रह गर्छु ।